Ny cumbia, gadona nentin-drazana any Kolombia | Fitsangatsanganana tanteraka
Tsy misy isalasalana fa ny gadona mozika mifandray indrindra Kolombia, ho an'ny kolontsainy sy ny mponina ao aminy, ny cumbia. Tsy misy fety na fankalazana eto amin'ity firenena ity izay tsy andrenesana ny tadim-peo sy fandihizany araka ny feon'ireo Cumbia Kolombiana. Sary famantarana ny mombamomba ny firenena.
Ity karazana mozika mivantana sy dihy folk ity dia teraka tany amoron'ny Karaiba, saingy tsy ela akory dia nanjary nalaza eran'ny firenena izy io. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka aminao momba ny niandohany, ny fomban-drazany ary zavatra maro hafa mifandraika amin'ny cumbia any Kolombia.
1 Fiandohan'ny cumbia Kolombiana
2 Cumbia Kolombiana: zavamaneno
3 Cumbia Kolombiana: akanjo nentim-paharazana
4 Cumbia Kolombiana: ny dihy
Fiandohan'ny cumbia Kolombiana
Toy ny fanehoana zavakanto sy kolontsaina maro hafa eto amin'izao tontolo izao, ny cumbia dia vokatry ny fifangaroana. Raha te hahalala ny niandohany dia mila mandeha mankany amin'ny taonjato faha-XNUMX ianao, mankany amin'ny morontsirak'i Atlantika izay any Colombia ankehitriny. Teo no nahitana ireo singa ara-kolotsaina fomban-drazana telo tena tsy mitovy: ny Amerikanina tera-tany, la eropeana (mifanome tanana amin'ny Espaniola) sy ny africana, entin'ireo andevo izay nentina tany amin'ny tontolo vaovao.
Ny tanàna na ny fomban-drazana ara-kolotsaina dia samy nanolotra singa hafa. Ny gadona dia mety hiorina amin'ny gadona aboriginal, raha ny lohahevitra sy ny tononkiran'ireo hira ireo dia manana fakany Espaniola mazava. Ary farany, ny maherifon'ny dihy sy dihy afrikanina Nofaranan'izy ireo ny fomba fahandro izay hitarika any amin'ny cumbia Kolombiana.
Ary izao no nahaterahan'ity vokatra mahafinaritra an'ny fangaro manan-karena sy isan-karazany ity.
Cumbia no gadona mozika nentim-paharazana indrindra any Kolombia
Na izany aza, ny Fiandohana etimolojia amin'ny teny hoe cumbia dia toa tsy mazava loatra. Miaro ny ankamaroan'ny manam-pahaizana fa avy amin'ny teny io kumbe, izay midika hoe "fety" na "feo" amin'ny fiteny afrikana maromaro.
Ny tsy misy isalasalana dia ny fahombiazan'ny zava-baovao mahavariana, izay hatrany am-piandohan'i Kolombia dia niely nandritra ny taona maro firenena maro hafa any Amerika Afovoany sy atsimo. Cumbia dia hiraina sy dihy amin'ny toerana lavitra mifanalavitra an'i Mexico, Peru, El Salvador, Venezoela, Arzantina na Peroa.
Cumbia Kolombiana: zavamaneno
Averina indray fa ny fanahy telo (amerikana, eropeana ary afrikana) an'ny cumbia dia hita taratra tsara ao amin'ny zavamaneno izay ampiasaina handikana azy.
Ny anjara andraikitra voalohany dia tsy isalasalana fa ho an'ny zavamaneno ampongaina. Ny gadona an'ny amponga, Anjara biriky ara-kolontsaina afrikanina, no fototry ny mpamorona rehetra. Izy ireo no nametraka ny gadona lehibe ary ampian'ny zavamaneno indizena toa ny tehina millet na ny sodina, avy amin'ny Espaniola tsy azo lavina.
Ny caña de millo, fitaovana fototra an'ny cumbia Kolombiana
Ao cumbia dia misy karazany telo ny amponga main:
El Drum sambatra, izay manaraka ny gadon'ilay gadona.
El Miantso amponga, ampiasaina hametrahana ny cadence aorian'ny hira.
La hoe tambora. Io ihany no iray amin'ireo amponga amponga tsy manana fiaviana afrikana. Voadona amin'ny tanana izy, tsy mampiasa baoritra, na amin'ny hoditra na amin'ny vata hazo.
Misy karazany telo koa sodina:
Kitapo hoditra lahy, izay toa fihodirana.
Kitapo vehivavy, izay miaraka amin'ny gadona.
Kitapo fohy, ampiasaina ho fitaovana solo ary manana ny lazany tokoa amin'ireo singa fitaovana tokana.
Ny cañamillero dia mpilalao tena ilaina ao amin'ny vondrona cumbia Kolombiana rehetra. Izy no mikasika ny Millo cane, zavamaneno entin'ny rivotra izay mampatsiahy ny sodina miampita. Araka ny asehon'ny anarany dia vita amin'ny tehina izy io, nefa azo atao amin'ny taolana na koa volotsangana. Ny maracas, ny akordey ary ny zavamaneno faharoa dia mameno ny sary.
Cumbia Kolombiana: akanjo nentim-paharazana
Tsy fampisehoana mozika i Cumbia, fa fampisehoana an-tsary ihany koa. Ary amin'ity lafiny ity dia miditra an-tsehatra amin'ireo mpandihy amin'ny akanjo nentin-drazana maro loko. Ny akanjo ampiasaina amin'ny cumbia dia ampiasaina amin'ny dihy kolombiana mahazatra ihany koa.
Ny akanjo mahazatra an'ny cumbia Kolombiana
Ilay vehivavy: ny baiko dia manafatra ny mpandihy ny akanjo fotsy mahazatra miaraka amina zipo na zipo malalaka. Izy io dia voaravaka kofehy ary, saika mandrakariva, miaraka amin'ny bolero mba hampisehoana ny lokon'ny sainam-pirenena Kolombia (mavo, mena ary manga). Izy ireo koa dia manao blouse misy tanany malalaka fa mamela ny soroka banga.
Ilay lehilahy: tsotra kokoa ny fitafian'izy ireo. Izy io dia misy pataloha fotsy sy lobaka ary, hanome azy lokon-doko, scarf mena fantatra amin'ny hoe "rambo akoho". Ny singa fototry ny akanjo lahy dia ny fomban-drazana satroka vueltiao.
Ny pitsopitsony sy ny firavaka rehetra amin'ity akanjo ity dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana ny dihy cumbia.
Cumbia Kolombiana: ny dihy
Misy karazana dihy sy choreograpie maromaro mifandraika amin'ny cumbia Kolombiana. Maneho ireo indrindra ny iray dihy mampiaraka. Miditra amin'ny sehatra ny lehilahy sy ny vehivavy zoro mifanohitra. Avy eo izy ireo dia niara-nifindra teo afovoany ary niara-nandihy tamin'ny gadona amponga. Ao amin'ity horonantsary ity dia manana ohatra tsara amin'ity dihy ity isika:
teo anivon 'ny fomba na fiovana isam-paritra Ny malaza indrindra amin'ny cumbia Kolombiana dia ahitana ireto manaraka ireto:
Cumbia mahazatra, tsy hiraina. Fitaovana tsotra fotsiny.
savannah cumbia, izay ampiasain'ny zavamaneno tena hafahafa antsoina hoe ravina voasarimakirana. Mandihizana ao amin'ny departemantan'i Sucre, Córdoba ary Bolívar izany.
cumbia vallenata, izay andraisan'ny akordeon (ilay fitaovana miavaka indrindra amin'ny vallenatos). Ao anatin'ity zaridaina cumbia any Kolombia ity dia misy karazany maro karazana.
Cumbiamba. Mandihizana amin'ny endrika dihy korontana tena mampiseho izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny cumbia, gadona nentin-drazana any Kolombia
dianita dia hoy izy:
Cumbia, amin'ny maha dihy kolombiana mahazatra azy, dia azo andihizana vondron'olona efatra na tena ilaina ny fitrandrahana.
Mamaly an'i dianita
Nati Melcon dia hoy izy:
che que vuena pag any Arzantina dia napetrak'izy ireo izahay mba hahalala momba ny cumbia izay pag tsara
Mamaly an'i nati melcon